Pakistan-yakatsigirwa masangano kumashure kwekushandiswa kweVPN kuJandK: DGP Dilbag Singh - VIDEO - Tamban RELAY
Pakistan-inotsigirwa nemasangano kumashure kwekushandiswa kweVPN kuJandK: DGP Dilbag Singh - VIDEO
J&K DGP Dilbag Singh akazivisa kuti kune masangano anotsigirwa nePakistan anoshandisa kushandiswa kweVPN.
Nyorera kuIndiaTV uye usakanganwe kudzvanya "THE BELL ICON" kuti usarasikirwa nezvimwe zvinogadziriswa-
Dhawunirodha the mobile application yeIndia ye # 1 nhau vhidhiyo:
Chinongedzo cheApp: https://bit.ly/2V2wnA3
Batanidza neApp: https://apple.co/2EB9lKr
Nezvedu: IndiaTV ndiyo inonyanya kuvimbika ye Hindi nzira chiteshi munyika. IndiaTV inovhara nhau dzichangoburwa muPolitics, Nyika, Nyika, Varaidzo, Ruzha, Bhizinesi uye Mitambo mitambo uye inopa ruzivo rwakavimbika pamapuratifomu ese - TV, Internet uye Nhare. Gara wakarongedzerwa zvirongwa zveIndiaTV zvinosimudzira senge Aap Ki Adalat naRajat Sharma, Aaj Ki Baat nemamwe akawanda anodzidzisa uye anoratidzira.
IndiaTV ndiyo yakavimbika ye Hindi nzira chiteshi muIndia. Iyo IndiaTV nhau chiteshi inounza nhau dzechizvino dzakanangana nezvematongerwo enyika, varaidzo, Bollywood, bhizinesi nemitambo kune vanoiona. Gara wakarongedzwa kuti urarame IndiaTV nhau uye nezazvino nhau muHindi.
Kuti uwane dzimwe nhau uye kugadziridza, shanyira nzvimbo yedu yepamutemo: https://www.indiatvnews.com
Kuti uverenge nhau dzichangoburwa dzinobva munyika nekune dzimwe nyika, tinya pane yedu saiti yeIndia: https://hindi.indiatvnews.com
Dzvanya kune ichangoburwa bhizinesi kufamba uye mushumo wakasarudzika kubva kubhizinesi nyika: https://hindi.indiatvnews.com/paisa
Tarisa uone pa: https://www.indiatvnews.com/livetv
Kune mamwe mavhidhiyo, shanya: https://www.indiatvnews.com/video
Kuti uwedzere mamwe mavhidhiyo eAap Ki Adalat, shanya:
Iyi vhidhiyo yakatanga kuonekwa pa https://www.youtube.com/watch?v=QA9ud7rktqw
masanganoAndroid 9angelina joliearafataubameyangbhora regoridhe 2018beyonce knowlesbrad pitt
TELES RELAY 21742 Posts 0 mashoko
Vakawanda vanoita zvepabonde vanobatana neiyo yakakwira kenza njodzi
Yekupedzisira iPhone mutengo runyorwa Kukadzi 2020, kubva ku iPhone 7 Plus kuenda ku iPhone 11 Pro Max - Tribunnews.com